Nkwakọ ngwaahịa Eco-freindly ahaziri ahazi okpomoku akara mkpuchi aluminom foil efu iko kọfị nespresso capsule
Akwukwo nri (hpmc) capsule
A na -eme capsule na -agwọ ọrịa site na HPMC, ụdị ihe ọkụkụ nke enweghị anụmanụ.
Mmiri dị ala: Ọ dị mma maka nri nke dị mfe ịmịkọrọ mmiri na/ma ọ bụ meghachi omume na ọdịnaya mmiri.
Kwụsie ike: Enweghị mmeghachi omume na-ejikọ ọnụ n'ihi nkwụsi ike dị elu. HPMC bụ cellulose akwukwo nri nke enweghị amino acid
. Ọwụwa anyanwụ ka ọ ga -agbasasị na obere oge iji hapụ nri dị n'ime.
Ngwaahịa & Nnyefe
Capsule gelatin nwere ike deform na oke okpomọkụ ma ọ bụ iru mmiri dị elu. A nabatara okpukpe niile gụnyere nke Ndị Kraịst, Buddha na Muslim.HPMC ebe niile na mmepụta na ịkwakọba ọgwụ, ihe ntecha na ọgwụ ike.
Na mpaghara 60,000 square mita, ụlọ ọrụ ahụ na -ahụ maka mmepụta nke capsules osisi HPMC na HPMC dị ka isi akụrụngwa. Anyị bụ ugbu a otu n'ime ndị na -emepụta capsules oghere nke nwere ikike ikike ọgụgụ isi nọọrọ onwe ha na China ma anyị bụkwa onye ndu na ụlọ ọrụ capsule osisi nke China.
Nke gara aga: Ọdịmma nchekwa ahụike dị mma na -agbaze ngwa ngwa ngwa ngwa jujujujuju ihe njide capsule maka probiotic capsule
Osote: Ọnụ ego dị elu dị oke nkpuchi capsules
Ụkpụrụ capsules efu
Capsules nke methylcellulose
Capsule nke Pullulan
Capsule cellulose nke akwụkwọ nri
Ọgwụ Mgbakwunye Akwụkwọ nri
100%BSE/TSE free HPMC/Akwukwo nri efu organic c ...
Ahaziri ebi akwụkwọ agba acha anụnụ anụnụ transperent whit ...
Eke HPMC akwukwo nri efu capsules maka ahụ ike ...
soplaya ọcha pink HPMC akwukwo nri efu capsul ...
Capsule efu nke akwụkwọ nri siri ike maka onye anaghị eri anụ
Size 00 HPMC Clear Efu anaghị eri anụ Capsules Cu ...